Ihe nwere ike imebi emebi: njirimara, ojiji na uru | Mmeghari ohuru Green
Ihe na -emebi emebi
Portillo nke German | | Nzughari
Na -eche nnukwu nsogbu zuru ụwa ọnụ anyị nwere na mmetọ plastik, ihe ndị nwere ike imebi ihe. Ha bụ ihe na -emebi emebi site na ntinye aka nke ihe ndị dị ndụ dị ka fungi na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ dị na okike. N'ihi nke a, ha anaghị arapara n'ime ala ma ọ bụ ihe ọ bụla na -adịghị emerụ emerụ. Usoro mmebi ahụ na -amalite site na nje bacteria na -ewepụta enzymes ma kwado mgbanwe nke ngwaahịa mbụ ka ọ bụrụ ihe dị mfe. N'ikpeazụ, a na -eji nwayọ etinye microparticles niile nke ala.
Maka nke a, ebe ọ bụ na ihe ndị nwere ike imebi ihe na -adị ezigbo mkpa, anyị ga -enyefe akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ha.
1 Kedu ihe bụ ihe ndị nwere ike imebi ihe
2 Ụdị ihe ndị nwere ike imebi ihe
2.1 Plastik sitere na starch na rye
2.2 Ihe sịntetik na -emebi emebi na plastik eke
2.3 Akwụkwọ na akwa eke
3 Uru nke ihe ndị na -emebi emebi
Kedu ihe bụ ihe ndị nwere ike imebi ihe
A na -ahụta ihe ndị na -emebi emebi ka ihe ndị ahụ niile na -erekasị n'ihi ihe fungi na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ dị na okike. Mgbe nje wakporo ihe, usoro mmebi ga -amalite, nke na -ewepụta enzymes iji nyere aka gbanwee ngwaahịa mbụ ka ọ bụrụ ihe dị mfe. Agba ikpeazụ gụnyere iji nwayọọ nwayọọ na -amịkọrọ ihe ndị sitere na ala.
N'aka nke ọzọ, ihe ndị na-anaghị emebi emebi na-anọgide n'ime ala wee bibie gburugburu ebe obibi. Ọtụtụ ihe sịntetị nke oge a enweghị nje nwere ike ime ka ọ dị mfe, ya mere ha na -anọgide na -emebibeghị ka oge na -aga, si otú a na -emetọ gburugburu ebe obibi.
Ọ dabara nke ọma, ọganihu sayensị enyekwarala anyị aka na ngalaba a, na -ekepụta ihe na -adigide gburugburu ebe obibi na ihe ndị nwere ike imebi ihe nke nwere ike dochie ndị nke ugbu a bụzi ihe mgbe ochie na ndị na -emerụ ahụ. Iji gbochie nchịkọta nke ogige ndị na-adịghị emebi emebi na okikeA na-amụ ihe ngwọta abụọ ugbu a: iji mgbọrọgwụ ma ọ bụ nje microbial nke nwere ike wakpo ngwaahịa ndị a na-ewere dị ka ndị na-adịghị emebi emebi, ma ọ bụ ihe na-emepe emepe nke nwere ike imebi site n'ụdị ndị nkịtị.
N'ụzọ dị otu a, nchịkọta ihe na -eme kwa ụbọchị na ụwa anyị, na ọtụtụ ndị amaghị, nwere ike kwụsị kpamkpam ma ọ bụ belata nnukwu nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ, ihe, wdg. Ịkwesighi ichere ọtụtụ afọ ruo mgbe ọ ga -apụ n'anya kpamkpam.
Ụdị ihe ndị nwere ike imebi ihe
Ka anyị hụ nke bụ ihe a na-ahụkarị nwere ike ibibi ihe:
Plastik sitere na starch na rye
A na -emepụta plastik na -emebi emebi nke a na -esi na ọka ma ọ bụ ọka wit eme n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dịka ọmụmaatụ iji mepụta akpa mkpofu. Mmebi nke plastik ndị a nwere ike were ọnwa 6 ruo 24, n'ime ala ma ọ bụ na mmiri, dabere na ọsọ nke etinyere starch.
N'otu aka ahụ, plastik nwere ike imebi ngwa ngwa nke e ji rye ma ọ bụ eriri nwere ike dochie nwere ike dochie plastik sitere na mmanụ ala. Otu n'ime ha dabere na starch rye ma na -abịa n'ụdị ihe granular a na -eji esi nri. Na mgbanwe ihe mejupụtara na usoro plasticizing, njirimara teknụzụ dị ka njupụta, modulus na -agbanwe, ike ọdụdọ, nrụrụ nwere ike nweta, wdg. Njirimara nke ihe ndị a yiri nnọọ nke polymers nkịtị nke sitere na mmanụ ala.
Ihe sịntetik na -emebi emebi na plastik eke
N'ime otu a, enwere ụdị polymer sịntetik nke nwere ike mebie n'onwe ya ma ọ bụ gbakwunye ihe nwere ike mee ka mbibi ha dị ngwa. Plastik ndị a gụnyere plastik oxygen-biodegradable na poly (ε-caprolactone) (PCL). Plastic oxidative nwere ike imebi bụ plastik sịntetik. PCL bụ polyester thermoplastic polyester nke nwere ike imebi ya na biocompatible nke ejiri na ngwa ahụike.
A na -emepụta ihe ndị sitere n'okike na -emepụta ihe, nke a na -akpọkwa biopolymers, site na akụrụngwa ndị a na -emegharị emegharị. Ụfọdụ ngwaahịa anyị kpọtụrụ aha gụnyere polysaccharides nke osisi mepụtara (starch ọka, akpu, wdg), polyester nke microorganisms mepụtara (ọkachasị nje dị iche iche), roba eke, wdg.
Akwụkwọ na akwa eke
Anyị na -eji akwụkwọ n'ụzọ ụfọdụ na ndụ anyị kwa ụbọchị, nke nwekwara ike bụrụ ihe nwere ike imebi. Ha nwere ike ịbụ akwa nhicha akwụkwọ, akwa nhicha, akwụkwọ ndetu, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ ozi nzipu ozi, akpa akwụkwọ kraft, akwụkwọ nnabata, tiketi na -adọba ụgbọala, efere akwụkwọ na iko, ụdị na ngwa., ma ọ bụ ọbụna isiokwu ndị na -enye aka. Ebe ọ bụ na akwụkwọ gbara anyị niile gburugburu, gịnị ma ị jigharịa ya?
Ị nwere ike gbanwee gaa n'uwe e ji kemịkal na -ewu ewu na owu, jute, linen, ajị anụ, ma ọ bụ akwa silk. Na mgbakwunye na silk, akwa ndị sitere n'okike dị ọnụ ala, dị mma iyi, na iku ume. N'adịghị ka akwa sịntetik, akwa eke nwere ike imebi emebi na ọ dịghị mkpa ka emee usoro sịntetik. Ọtụtụ uru nke ngwaahịa ndị a bụ na ha na-akụda ngwa ngwa ma ha anaghị emepụta ngwaahịa na-egbu egbu. N'aka nke ọzọ, nylon, polyester, lycra, wdg. A na-arụ ha site na nhazi sịntetik ma bụrụ akwa na-enweghị ike imebi.
Uru nke ihe ndị na -emebi emebi
Enwere ọtụtụ uru na iji ihe ndị nwere ike imebi ihe. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Anaghị emepụta ihe mkpofu: Ha bụ ihe eke sitere n'okike nke ụmụ nje nwere ike iri n'enweghị nsogbu, ọ bụ ya mere m ji eji ha arụ ọrụ na okirikiri ndụ m. Ya mere, ọ naghị emepụta ihe mkpofu n'ihi na ọ naghị anọ na mkpofu ahịhịa ma ọ bụ nsị ruo ogologo oge.
Ọ naghị ewepụta mkpokọta ahịhịa: Ha bụ ezigbo ihe ngwọta maka nsogbu oghere dị na mkpofu ahịhịa, n'ihi nchịkọta nke ihe ndị na-adịghị emebi emebi.
Ha dị mfe imepụta na ịchịkwa: Ị nwere ike iji ihe nwere ike imebi ihe ọ bụla mee ihe ọ bụla na -enweghị ibelata ogo.
Ha enweghị nsị.
Ha dị mfe imegharị.
Na -ewu ewu: Ọ bụ ahịa na -arịwanye elu ma na -amakwa ya nke ọma.
Ha anaghị emerụ emerụ: Ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka mkpofu ha, ihe ndị na -emebi emebi nwere obere mmetụta na odida obodo na gburugburu ebe obibi.
Na -eme ka ị na -akwado.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe ndị nwere ike mebiri emebi na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Ihe na -emebi emebi
Ọdịiche dị n'etiti nje na nje